माउन्ट ओलम्पस | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | ग्रीस, मार्गदर्शकहरू
संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध हिमालहरू मध्ये एक हो ओलम्पस माउन्ट गर्नुहोस्, ग्रीसमा सब भन्दा लोकप्रिय हिमाल र सबै भन्दा उच्च। अनन्तसम्म बाध्य ग्रीक पौराणिक कथा आज यो हजारौं दर्शकहरूको गन्तव्य हो जुन यसको रूपहरू र प्रकृतिलाई प्रशंसा गर्न आउँदछन्।
यहाँ तपाईं केही चीज गर्न सक्नुहुन्छ, हिंड्न सक्नुहुन्छ, यसको चुचुराहरू चढ्न सक्नुहुन्छ, यसको आश्रयमा सुत्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको जीवनको सब भन्दा अविश्वसनीय क्षणहरू लिन सक्नुहुन्छ। आज माउन्ट ओलम्पसलाई हेरौं।
1 ओलम्पस माउन्ट गर्नुहोस्
2 माउन्ट ओलम्पसको भ्रमण गर्नुहोस्
ओलम्पस माउन्ट गर्नुहोस्
यो तलछट चट्टान द्वारा गठन गरिएको थियो करीव १ 200० मिलियन वर्ष पहिले एक उथल समुद्र के थियो एक मिलियन बर्ष पछि हिमनदीहरूले यसलाई कभर गरे र परिदृश्यलाई परिमार्जन गरे र पछि जब बरफ पग्लियो, नदीहरू बग्दा चट्टानहरू र पृथ्वीहरू बग्न पुग्यो र वरिपरिका भूभागलाई नयाँ आकार दिए। यी भूवैज्ञानिक घटनाहरू आज माउन्टको अनौठो मोर्फोलोजीमा र दृश्यमान छन् यसको चुचुरो र गहिरो घाटीहरू.
हिमालको तल्लो क्षेत्रहरूमा मौसम भूमध्यसागरीय छ, गर्मीमा तातो र सुख्खा र चिसो जाडोमा चिसो र चिसो। अधिक उचाइमा हिउँ र वर्षा गर्मीमा देखा पर्छ। वास्तवमा, चुचुराहरू, सब भन्दा माथिल्लो क्षेत्र लगभग २ हजार मिटरमा यससँग वर्षाको बाह्र महिनाको नौौं हिउँ छ, सेप्टेम्बर देखि मे छ। यी मौसमले हिमालको वनस्पति र जीव जन्तुहरूलाई विविधता प्रदान गर्दछ। २ Greek% ग्रीक वनस्पति यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यहाँ धेरै स्थानिक प्रजातिहरू छन्।
अर्को तर्फ, त्यहाँ ग्रीक पौराणिक कथाको साथ हिमालको पुरानो लिंक छ, जुन बाह्र ओलम्पियन भगवानहरूको घरत्यसोभए तपाईंले यो सबै डाटा थप्नुभयो र तपाईंसँग त्यहाँ ठूलो पर्वत छ जुन प्रत्येक वर्ष बढि आगन्तुकहरूको लागि पर्खिरहन्छ।
ओलम्पस माउन्ट गर्नुहोस् ग्रीसको पूर्वोत्तर हो र २ 2917 १। मिटरमा छ हामी जस्तै भने यो ग्रीसको सब भन्दा अग्लो पहाड हो र बाल्कनमा दोस्रो उच्च हो। यसको तल्लो झोलाहरू धेरै नै साँघुरो र ठूला ज green्गली झरना र गुफाले कुँदिएका हरियो घाटीहरूसहित वन गरिन्छ। तिनीहरूको चुचुराहरू, त्यहाँ छन् Pe२ चोटिउनीहरूसँग वर्षमा धेरै महिना हिउँ हुन्छ र प्रायः स्थायी रूपमा बादलले लुकाइन्छ।
Mytikas मा आरोहण गर्न सबैभन्दा कठिन शिखर, शिखर पहिलो पटक १ for १ in मा पुगेको थियो। त्यसबेलादेखि, साहसिक व्यक्तिहरू आइपुगेका छैनन्, तर यो यात्रा पक्कै गाह्रो छ। सन् १ 1913 .० को दशक पछि देखि, सम्पूर्ण क्षेत्र मानिन्छ राष्ट्रिय पार्क, यसको महान जैव विविधताका लागि, र १ 1981 XNUMX१ पछि युनेस्कोले यस शीर्षकलाई पुरस्कृत गर्यो जैव क्षेत्र रिजर्व।
ओलम्पस माउन्ट गर्नुहोस् म्यासिडोनिया र थेस्लीको क्षेत्रहरु बीचको सिमानामा छ र यसमा पुग्ने उत्तम मार्ग र यसका धेरै पथहरू पहाडको फेदमा लिटोचोरोको टुरिस्ट गाउँबाट हो। यदि तपाईंसँग कार छ वा थिस्सलोनिकीमा हुनुहुन्छ भने, टोल मोटरवेबाट यात्रा केवल तीन घण्टाको हुन्छ र यो एथेन्सबाट छ छ (राजधानी र पहाडको बीचमा २ 263 किलोमिटर टाढा छ)। यदि तपाईं एथेन्सबाट लरिसा (पाँच घण्टा) सम्म रेलमा पुग्न सक्नुहुन्न, र त्यहाँबाट लिटोचोरोमा ट्याक्सीबाट केवल आधा घण्टाको लागि जानुहोस्।
थिस्सलोनिकीबाट रेलको मामलामा यो सिधा सेवा हो र एक घण्टा १० मिनेट लिन्छ र पछि छोटो ट्याक्सी सवारी पनि आउँदछ। यदि तपाईंलाई बस मनपर्‍यो भने तपाईं एउटा थिस्सलोनिकीको टर्मिनलबाट दुई घण्टा दश मिनेट र सात घण्टा एथेन्सबाट लिन सक्नुहुनेछ।
हामी पहाडको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी कुरा गर्छौं चढाई वा पैदल यात्रा। माउन्ट ओलम्पसमा यी गतिविधिहरू कसरी छन्? राम्रो, सरल, यद्यपि कठिनाइ बिना नै। त्यहाँ धेरै सजिलो ट्रेलहरू छन् पछ्याउनको लागि तिनीहरूले तपाईंलाई उत्तम घाटीहरूमा लैजान्छन्, दृश्यको दृश्यबाट। कम्तीमा सडकको सुरूमा पनि तपाईले एउटा अंश चलाउन सक्नुहुन्छ। माउन्ट ओलम्पसको एक पूरा यात्रामा करीव तीन दिन र एक रात लाग्छ।
को signposted पथहरू उनीहरूसँग कठिनाईको बिभिन्न डिग्रीहरू छन्, III देखि VIII सम्म, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार। EOS (ग्रीक पर्वतारोहण क्लब) मा सोधपुछ गर्नु राम्रो हुन्छ, लिथोचोरोमा आधारित, जहाँ तपाईं नक्शा र सुझावहरू पाउन सक्नुहुन्छ। साथै, यदि तपाईं बाटोको साथ कसैको मद्दत चाहनुहुन्छ भने, तपाईं परामर्श गर्न सक्नुहुनेछ र पियेरिया, अर्को छेउछाउको शहरबाट गाइड भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ।
हामीले माथि भनेझैं माउन्ट ओलम्पस मा यात्रा को सबै भन्दा राम्रो सुरूवात लिटोचोरो हो। साहसिक सुरू गर्न त्यहाँ धेरै होटल र जानकारीहरू छन्। तपाइँ शिविर साइटहरूका बारे जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जंगली वा नि: शुल्क शिविर अवैध छ युनानमा यति तपाईले पहाडको आधारमा अद्वितीय स्थानमा गर्नु पर्छ, बाँकी पार्कमा यो निषेध गरिएको छ।
जब यो पैदल यात्राको कुरा आउँछ त्यहाँ केहि हुन्छन् ट्रेल्स सजिलो रूपमा वर्गीकृत। ती मध्ये एक हो गोलोना, कास्टाना र लिथोचरोको साथ लिटोचोरोमा फेरि सामेल हुनुहोस्। लिचोचोरो सात हजार बासिन्दाहरूको शहर हो जहाँबाट पहाडमा असंख्य पर्यटन र यात्राहरू हुन्छन् जुन एकदमै सुरम्य पारंपरिक वास्तुकलाको साइट हो। बाटोले तपाईको एगिओस योअनिसको चर्च र पैगंबर एलियाको २ see०० मिटर अग्लो देख्नका लागि लिन्छ। यो यस मार्गको अधिकतम उचाई हो।
त्यसो भए, तपाई यहाँबाट एक घण्टा गोलनामा पुग्नुभयो जहाँबाट तपाईले उत्कृष्ट शिखरहरू देख्न सक्नुहुनेछ ईनिपासको घाटी। उत्तर पश्चिम तर्फ, तपाईं E4 मार्ग तर्फ जानुहुन्छ जुन प्रिटोनियाको साथ लिट्टोचोरोलाई जोड्दछ र यसरी तपाईं फर्कनुहुन्छ, चार घण्टाको अन्तिम दृश्यमा सुन्दर दृश्यहरूका बीचमा हिंडेर।
अर्को सजिलो मार्ग भनेको त्यो हो, जुन प्रिओनिया छोड्दै, अघिओ स्पिलियो हुँदै स्यान डियोनिसियोको मठसम्म पुग्छ। त्यसपछि प्रियोनियाबाट निस्केर तपाईंले E4 बाटो लिटोचोरो तर्फ लिनुहुनेछ र नक्साको अनुसरण गर्दै तपाईं झरनाहरू हुँदै जानुहुनेछ, तपाईं एनिपस घाटीलाई काठको पुलबाट पार गर्नुहुनेछ र तपाईं Ahiio Spilleo र संतको गुम्बामा पुग्नुहुनेछ। यो हिँड्न को दुई घण्टा छ।
तेस्रो साधारण मार्ग भनेको एक हो जुन क्रेवाटिया भ्रान्टस, पापा एलोनी र अघिया ट्राइडासँग मिल्दछ। यो मार्ग माथि र तल जान्छ तर कुनै पनि केसमा यो 950० मिटर भन्दा बढी हुँदैन। यो क्रेवाटिया शरणबाट सुरू हुन्छ, पुरानो मार्गमा जारी रहन्छ जुन तल अघिया ट्राइडा जान्छ, ज forest्गलको बीचमा, तपाईं नदी पार गर्नुहुन्छ र minutes० मिनेट पैदल पछि तपाईं पापा एलोनीमा पुग्नुहुन्छ। हो पछि, तपाईंसँग छ अन्य ट्रेल्स जुन मध्यम कठिनाई र गाह्रो - खतरनाकको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। पछि मात्र यो गर्नुपर्दछ यदि एक विशेषज्ञ छ वा कुनै गाइडसँग जान्छ जो भूभाग धेरै जान्दछ।
अन्तमा, यदि शारीरिक साहसिक कार्य तपाईको होईन भने तपाई सँधै गर्न सक्नुहुन्छ गाउँ गाउँ हिमालबाट लिटोचोरो उही, डियोन जुन एक विशिष्ट प्राचीन म्यासेडोनियन शहर हो, Anus Skotina, एक राम्रो पहाडी गाउँ, पलाइज Panteleimonas १th औं शताब्दी वा पलाओइ पोरोइ, १ rock औं र १ XNUMX औं शताब्दीको बीचमा बनाइएको एउटा चट्टान गाउँ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » ग्रीस » माउन्ट ओलम्पसको भ्रमण गर्नुहोस्